September 10, 2013 – democracy for burma
U WIRA THU: State Sangha Maha Nayaka Committee (SSMNC) on banning …
On September 10, 2013 September 11, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ဆရာတော် မှာ အင်အား ၅သိန်း ကျော် ရှိတယ် စစ်တပ်အင်အားက ၃သိန်းလား ၄ သိန်းလား ရဲ နဲ့ပေါင်းရင်တောင် သံဃာ အင်အားကို မမှီနိုင်ပါဘူး စစ်တပ်ကို နောင် ဘယ်တော့မှ ဦးမထောင်နိုင်အပီးတိုင် တိုက်ထုတ်ပြစ်ပါ
The State Sangha Maha Nayaka Committee (SSMNC),agovernment-appointed body of high-ranking monks that oversees and regulates the Buddhist clergy in Burma, issued the directive on the grounds that the 969 movement’s tenets were not accordance with the rules and regulations set by the SSMNC. The order, dated Aug. 14, states that it is illegal to form monk networks organized around the principles of the 969 movement, and bars linking the 969 emblem to the Buddhist religion…
UNFC-Info-September Release- 2013 English/BURMESE
On September 10, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Celebrated graphic and street artist Pharuephon “Tum” Mukdasanit, “Mamafaka” died afterasurfing accident at Kata Beach on Saturday.
On September 10, 2013 September 10, 2013 By Burma Myanmar newsIn AseanLeaveacomment
Pharuephon “Tum” Mukdasanit, 34, better known as “Mamafaka”
” ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းမီဒီများထံ အနူးအညွတ် အကူအညီတောင်းခံခြင်း “
On September 10, 2013 September 10, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
source Kowai Lu
” ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းမီဒီများထံ အနူးအညွတ် အကူအညီတောင်းခံခြင်း ”
ပဲခူးမြို့တွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရပြီး ပဲခူးထောင်တွင် အချုပ်ခံနေရကာ ပဲခူးတရားရုံးတော်တွင် အမှုရင်ဆိုင်နေရသော ဦးဝင်းချို နှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ ၊ ပဲခူးလယ်သမားများ ရုံးချိန်း (၁၂) ရက်နေ့ ထပ်မံ တရားရင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်ပါသည် ။
၃၁.၈.၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီး မိသားစုများနှင့် ရှေ့နေများမှ ၁၃.၉.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ရုံုးထတ်မည်ဟု ကာယကံရှင်များ နှင့်အတူ သိခဲ့ရသော်လည်း ရှောင်တစ်ခင် မိသားစုများ ရောက်ရှိဧည့်တွေ့ခဲ့သည့် ၂.၉.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ညနေ ၃း၃၅ မိနစ်အချိန်တွင် ရုံးထုတ် စစ်ဆေးခဲ့ သည် ။
၅.၉.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ရုံးချိန်း ပြန်လည် ဆင့်ဆိုခံရမှုကြောင့် ဒေသခံ လယ်သမားများ ၊ တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများ နှင့် နိင်ငံရေး အင်အားစုများ ၊ ဒေသခံ ပြည်သူလူထုများမှ အာဏာပိုင်များ၏ ပြောဆို လုပ်ဆောင်နေမှုအပေါ် လွန်စွာ မကျေလည်ခဲ့ကြပြီး ၅.၉.၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် တရားရုံး အပေါ်ထပ် စစ်ဆေးရာ တရားရုံးခန်းသွား အပေါ်ထပ် ပြိုကျလုမတက် မတရားစွဲဆိုခံရသည့် အမှုအား လာရောက် လေ့လာ စောင့်ကြည့်မှုများ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရသူများအား အားပေး ဂုဏ်ယူ ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ကြပါသည် ။
ရန်ကုန်မြို့မှ ဥပဒေအကျိုးဆောင် ဦးရောဘက်စန်းအောင် နှင့် ရှေ့နေများမှ အခမဲ့ လာရောက်၍
ဥပဒေ အကျိုးဆောင်ကြသလို တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ ၊ ပြည်သူ့ အကျိုးဆောင်များ ၊ ရန်ကုန် လယ်သမားများမှ လည်း ကား (၂) စီးဖြင့် တရားမျှတမှု နှင့် ပြည်သူ့ဘ၀ ဥပဒေအရ လုံခြုံစိတ်ချမှု ရရှိရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ တောင်းဆို ဆန္ဒပြခဲ့သည့် ဦးဝင်းချို နှင့် တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ လူငယ်များ ၊ ဒေသခံ ပဲခူးလယ်သမားများအား ထောက်ခံ အားပေးကြောင်း သွားရောက် ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါသည် ။
မူလ ပထမက ယင်းနေ့တွင် စီရင်ချက်ချမည်ဟု ထိုနေ့တွင် ကြားသိနေရပြီး နောက်ဆုံးတွင် အာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများကိုသာ စစ်ဆေး၍ ၁၂.၉.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ရုံးပြန် ချိန်းလိုက်ပါသည် ။ သက်ဆိုင်ရာသို့ အကြိမ်ကြိမ် အဆင့်ဆင့် ဒေသခံ လယ်သမားများ၏ နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှုများ အား အချိန်မှီ သက်ဆိုင်ရာမှ ဆောင်ရွက်နိင်ရန် ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ တရားဝင် စာများတင်ပြခဲ့သောလည်ိးိအကြောင်းပြချက်များကို ဥပေးနှင့်အညီ မပေးပဲ ပဲခူးတိုင်းမှာ ဆန္ဒပြခွင့် ဘယ်တုန်းကမှ မရဘူး ၊ ပေးလဲ မပေးခဲ့ဘူး စသော အာဏာရှင် ဓလေ့ အပြောအဆိုများ အပါအ၀င် ဆန္ဒပြရသည့် အကြောင်း အရင်းသည် တပ်မတော် အရာရှိအချို့ပါဝင်နေသော အကြောင်းတရား များ ဖြစ်သဖြင့် အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံ ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း သိရှိရပါသည် ။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၅၄ အရ စာတင်ရန်မလိုသော ပြည်သူ့ဆန္ဒ တင်ပြ ထုတ်ဖော် မှုများပြုလုပ်နိင်ရန် လက်နက်မပါလျှင် ငြိမ်းချမ်းစွာ လူသူစုဝေးခွင့် ၊ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ရှိသည် ။ ခွင့်ပြုချက် မပေးသဖြင့် ဒေသခံ လယ်သမားထု၏ အချိန်နှင့် ဘ၀ လိုအပ်မှုအရ ဘ၀ကို ရင်း၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ လှည့်လည် တင်ပြခဲ့ကြပါသည် ။ နိင်ငံသားများသည် ခွင့်ပြုချက်မရပဲ စီတန်းလှည့်လည်
သဖြင့် တည်ဆဲ(အများပြည်သူ လက်မခံသော ) ပုဒ်မ (၁၈) ဖြင့်သာ အရေးယူရမည်ဖြစ်သည် ။အာမခံဖြင့် အမှုရင်ဆိုင်စေကာ တင်ပြချက် အကြောင်းအရာကိုလဲ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရမှ ပြေလည် အောင် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရမည့် အခြေအနေကို နောက်ကွယ်က မည်သည့်လက်များမှ စီစဉ်သည် မသိသော အထက်အမိန့်အရဟု ဆိုကာ အာမခံပေးရန် ခက်ခဲသော ပုဒ်မ (၅၀၅/ခ) ဖြင့် တရားစွဲဆို အကျဉ်းထောင်သို့ ပို့ဆောင်ခြင်း ၊ ပုဒ်မ (၁၈) များအား အာမခံမပေးပဲ အကျဉ်းထောင်တွင် ချုပ်နှောင်ထာားခြင်းများသည် ဥပဒေကို ကျော်လွန် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိသာထင်မြင်စေသော အခြေအနေများ ဖြစ်ပါသည် ။ Continue reading “” ပြည်တွင်း ပြည်ပ သတင်းမီဒီများထံ အနူးအညွတ် အကူအညီတောင်းခံခြင်း “” →
President’s spokesperson makes no definite reply to rumour of President forming new political party
Ye Htut, deputy minister for information, spokesperson of President Thein Sein, made no definite reply to the rumour that the President was forminganew political party based on religion and nationalism.
The rumour that the President was in preparation of forming the political party based on the religion and nationalism widely spread among the political analysts on September 9. When the Daily Eleven tried to contact Ye Htut, spokesperson of the President Office and deputy minister of information, an official of the President Office turned down the rumour spreading among the political analysts, saying it is not true.
Ye Htut replied through e-mail that the President was placing special emphasis on improving socio-economic life of the people, restoring genuine peace with ethnic armed groups and creating better future for the youths.
The Daily Eleven tried to contact Ye Htut through e-mail at 3.39 pm on September 9, but the spokesperson made indefinite reply at about 11 am on September 10.
“We cannot definitely say it is wrong news that the President will formapolitical party. It is also possible that the news has come out asapolitical game. But the news does not seem to be completely deniable. If [the President] will actually formaparty, it is not possible during this year. It can be only next year. However, it is impossible that nationalism and religion are directly based on,” said Dr Yan Myo Thein, the distinguished author in Myanmar politics.
“I think the news is impossible. But, it can be seen the complications appearing in their inner circle. There are four units [in the circle]. At the army, [the head] is Senior General Min Aung Hlaing. At the government is President Thein Sein. At the parliament is Thura Shwe Mann. And at the [ruling] Union Solidarity and Development Party is Htay Oo. When there are these four units, it is possible the news has come out. For me, I think the news is impossible,” said Hla Shwe, the leader of the Students’ Union in 1962.
The widespread rumour that President Thein Sein is formingapolitical party based on nationalism and religion is false, an official from the President’s Office said today.
Speaking on condition of anonymity, the official dismissed the rumor, which spread among political analysts yesterday, by saying it is groundless.
“We have nothing to say about this. They are probably just opinions. As far as we know, it’s not true. The Constitution already states that religion shouldn’t be used in politics. One shouldn’t abuse nationalism and religion. This is groundless,” said the official. Continue reading “President’s spokesperson makes no definite reply to rumour of President forming new political party” →
In Bangladesh, UNHCR helps first ethnic Rakhine refugee family to return to Myanmar
DHAKA, Bangladesh, September9(UNHCR) – Asajournalist, Kyaw Zin Moe makes the news every day. But now he is in the spotlight foradifferent reason: Kyaw, his wife and baby have become the first Myanmar refugee family to be assisted home by UNHCR in Bangladesh.
Encouraged by positive developments in Myanmar in recent years, some refugee families have already returned on their own from neighbouring Bangladesh. Kyaw is the first to request UNHCR support for his journey. He is clearly excited about what is going on in his home country.
“Myanmar is establishing democracy,” said the ethnic Rakhine refugee, aged 34. “Things will not change overnight. We shall all go back to make the changes happen.”
On Friday, his family left Dhaka, flew to Bangkok and on to the Myanmar capital, Yangon, from where they tookabus back to their village in Myan Aung, west of Yangon. The return marks the end ofalong journey for them.
Shan State Army (SSA) patrol clash
Joint Shan State Army (SSA) patrol ran into Burma Army’s Light Infantry Battalion (LIB) 501 patrol yesterday evening. The Shans retired. The Burma Army formedajoint search-and-destroy column made up of elements from LIB 501 and LIB 505. It resulted in another clash this morning.5dead on the Burma Army side, according to Army run militia sources. The clashes took place 20 miles north of Hsipaw.(SHAN)
U WIRA THU : “ပီနန်ဆရာတော်ကြီး မစိုးရိမ်တိုက်သစ်သို့ ကြွရောက်”
“ပီနန်ဆရာတော်ကြီး မစိုးရိမ်တိုက်သစ်သို့ ကြွရောက်”
8.9.2013 မနက် 8:00 တွင် ပီနန်ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တပညာဝံသမဟာထေရ် မန္တလေးမြို့၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ် သို့ ကြွရောက်တော်မူပြီး မဟာနာယကဆရာတော်သုံးပါးနှင့် နာယကဆရာတော်များအား မဟာသန္တိသုခ စင်တာ သာသနာပြုကျောင်းတော်ကြီးနှင့် ပတ်သက်သည့် အခြေအနေများကို ရှင်းပြကာ သြဝါဒတရား မိန့်ကြားတော်မူသည်။
A Kachin military volunteer tortured and beaten to death-ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ မင်းအောင်လှိုင်ရေ… ခင်ဗျာ့ စစ်သားတွေအားလုံး
A Kachin military volunteer tortured and beaten to death
Tuesday, Sept 10, 2013 by KLN
Local residents found the body of Brang Shawng,aKachin people militia volunteer from Yingseng village who served under KIA’s 36th Battalion in northern Shan State, near Loi Dang village on Sept 6.
He was captured by Burmese army troops duringabattle that took place at Loi Dang on Sept3from 1 pm to2pm between the two sides. KIA sources say wounded Brang Shawng was tortured and beaten to death by Burmese troops.
ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ မင်းအောင်လှိုင်ရေ… ခင်ဗျာ့ စစ်သားတွေအားလုံး ခွေးစိတ်ပေါက်နေကြတာလား။ ဒါမှမဟုတ် တချို့တလေလောက်ပဲ ခွေးစိတ်ပေါက်နေတာလား… ဘာပဲ ပြောပြော လူစိတ်မရှိတဲ့ စစ်သားတွေ ခင်ဗျားတပ်ထဲမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာတော့ ဘယ်လိုမှ ငြင်းလို့မရဘူး။ တပ်မတော်ဆိုတဲ့ ခင်ဗျားစစ်တပ်က စစ်သားတွေ ဒါဇင်နဲ့ချီပြီး အရှင်ဖမ်းမိတုန်းက သူပုန်တွေပါလို့ ခင်ဗျားတို့ စွတ်စွဲနေတဲ့ KIA က သတ်ဖို့နေနေသာသာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကျွေးမွေးပြီး ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်မဟုတ်လား။ အခု ရှားရှားပါးပါး ကချင်စစ်သားတစ်ယောက် စစ်သုန့်ပန်းအနေနဲ့ အရှင်ဖမ်းမိပါတယ် ရက်ရက်စက်စက် မသေမချင်း နှိပ်စက် ရိုက်သတ်လိုက်တဲ့အပြင် ခွေးလို ဝက်လို လွှင့်ပြစ်ထားခဲ့တယ်။ ဝစ်သောက် စောက်ရှက် စစ်တပ်ပဲ…. စစ်သုန့်ပန်းကို သတ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာ လူလိုနားမလည်ဘူးလား…..
U WIRA THU: “သွေးစက်တွေနဲ့ပေးဆပ်ခဲ့လေသော ရခိုင်ရဟန်းတော် အာဇာနည် အရှင်ဥတ္တမ”၁။ “ဂုဏ်ယူပါသည် ဆရာတော်ဘုရား”
“သွေးစက်တွေနဲ့ပေးဆပ်ခဲ့လေသော ရခိုင်ရဟန်းတော် အာဇာနည် အရှင်ဥတ္တမ”
၁။ “ဂုဏ်ယူပါသည် ဆရာတော်ဘုရား”
ကာရက်ဒေါက် ကိုးဆက် ရဲရဲတောက် တပ်လှန့်သံဖြင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမျက်စိကို စတင်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး၊ ကျွန်စိတ်ဓာတ်ကို ဖျောက်ဖျက်ပေးခဲ့သော ပထမဦးဆုံး လောကအလင်းရှင်အဖြစ် အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းစဉ်ဖြင့် တော်လှန်ရေးဦးဆောင်ခဲ့သော ပထမဦးဆုံးသော မြန်မာရဟန်းတော် တစ်ပါးအဖြစ် ဂုဏ်ယူ လျက်ပါဘုရား။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ မြန်မာရဟန်းတော်တွေဟာ ပြည်သူလူထုအတွက် အမြဲတန်း ရှေ့တန်းမှပါဝင် ပေးဆပ်ခဲ့ကြောင်းကို သွေးစက်ချ၍ လမ်းပြခဲ့သော ဗုဒ္ဓင်္ကုရ အာဇာနည်သူရဲကောင်းအဖြစ် ရင်ထဲအသဲထဲ၌ အမြဲတန်း ဂုဏ်ယူလေးစားလျက်ပါဘုရား။
၂။ “သံဝေဂရဖွယ်ပါ ဆရာတော်ဘုရား”
ခေတ်ကောင်းစဉ်က လက်ခုပ်သြဘာများဖြင့် ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုခံခဲ့ရသလို ခေတ်မကောင်းချိန်မှာ လမ်းဘေးလူနာဘဝ အထီးကျန်ပုံစံမျိုး လောကဓံအလှည့်အပြောင်းခံခဲ့ရသော ဆရာတော်ဘုရား ဖြစ်ရပ်ဟာ နိုင်ငံရေးရဟန်းတော်များအတွက် သင်္ခန်းစာ အကြီးကြီး ရစေပါတယ်ဘုရား။
၃။ “မြန်မာပြည်ရဲ့ အတွက် ပါရမီဆရာတော်ဘုရား”
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး မီးရှူးတန်ဆောင် အသက်သွေးချွေးပေးဆပ်ခဲ့သော မြန်မာရဟန်းတော်တစ်ပါး ပျံလွန်တော်မူပြီးမှ ရရှိလိုက်သည်က ကျောက်တိုင်လေးတစ်ခုနှင့် ပန်းခြံလေးတစ်ပါဘုရား။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကမှာ နိုင်ငံရေးသမားစစ်စစ်ကိုပြပါဆိုရင် ငါလို ရဟန်းတော်တွေကို အရင်ဆုံး လက်ညှိုးထိုးပြပါဟု မပြောသော်လည်း ပြောသကဲ့သို့ ဘာအကျိုးအမြတ်မှ မမျှော်ကိုးဘဲ ပြည်သူ့အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့လေသော အကောင်းဆုံး၊ မြန်မာပြည်က နိက္ခမပါရမီ ဖြည့်ဆည်းဖို့ နိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့လေသော ဆရာတော်ဘုရား ရခိုင်အာဇာနည် ဦးဥတ္တမမထေရ်၏ လမ်းစဉ်ကို မြန်မာပြည်ရဟန်းသံဃာအားလုံး လျှောက်လှမ်းဖို့ရန် တောင်းပန်တိုက်တွန်းမည့်အကြောင်း ဆရာတပည့် ခြေတော်ဦးခိုက် လျှောက်ထားအပ် ပါသည်ဘုရား။
TO SEE ALL POST U WIRA THU CLICK: https://democracyforburma.wordpress.com/?s=U+WIRA+THU